मलेसियाको अस्पतालमा श्रीमानको शव कुर्दै विछिप्त नेपाली चेली, विषाक्त रक्सीले १९ विदेशी कामदारको मृत्यु, कति छन् नेपाली? – Halkaro
काठमाडौँ । ‘यो सब यति चाँडो यस्तो भयो,’ मलेसियाको सुनगाइ बुलोह अस्पतालमा मंगलबार दिउसो मृत्यु भएका एक नेपालीकी श्रीमती भन्दै थिइन्। मलेसियामा विषाक्त रक्सीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुगिसकेको छ। अझै १४ जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। उनीहरूको अवस्था गभ्भिर रहेको दी स्टार अनलार्इन मलेसियाले जनाएको छ।
मृत्यु हुने मध्ये एक जना नेपाली छन्, आइते सिंह गोले।
मंगलबार दिनभर अस्पतालको शवगृह अगाडि पतिको मृत शरीर बुझ्नका लागि पखाईमा थिइन् उनकी श्रीमती ३७ वर्षीया माया डोल्मो। उनले श्रीमानको मृत्युको खबर यति छिट्टै सुन्नु पर्‍यो। भर्खरै उनी काममा मात्र पुग्दै थिइन्। श्रीमान डेरामै थिए। उनले फोन गरे श्वास फेर्न गाह्रो भएको भन्दै। उनी तुरुन्त श्रीमान भएको स्थानमा पुगिन्। तत्काल श्रीमानलाई अस्पताल पुराइन्। तर अस्पतालले १५ मिनेटमा नै गोलेको मृत्युको घोषण गर्‍यो।
‘उहाँ कामबाट गएरात घरमा आउनुभएको थियो। उहाँले अलिकति पिएर आएको बताउनुभएको थिया,’ शवगृह अगाडि भेटिएकी उनले भनिन्, ‘राती ठिक ठाक नै हुनुहुन्थ्यो। विहान म काममा निस्कनु अगाडि पनि ठिकै हुनुहन्थ्यो।’
डोल्मो विछिप्त अवस्थामा अस्पतालको शवगृह अगाडि श्रीमानको मृत शरीरको विषयमा कसैले बोलिदेला भनेर बसिररहेकी छन्।
‘मलाइ दुई बजे फोर्न गर्नुभयो। श्वास फेर्न गारो भयो भन्दै। हतारहतार घर पुगेँ। अस्पताल ल्याए यो सब यति छिट्टै भयो की हामी अस्पतालमा पुग्यौँ। १५ मिनेटमा नै मलाई भनियो उहाँ जानुभयो,’ उनले भनिन्।
सिंह मलेसियामा ८ वर्ष देखि एउटा प्लास्टिक उद्योगमा काम गर्थे उनीमाथि निर्भर तीन सन्तान छन् १०, १५ र १७ वर्षका।
मलेसियामा विषाक्त रक्सी सेवान गरी विरामी परेका विरामीहरू ५१ पुगेका छन्। उनीहरूले क्लाङ उपत्यका विभिन्न स्टोरबाट सोमबार मण्डाले ह्वीस्की, किङफिसर वियर र ग्राण्ड रोयल ह्वीस्की खाएका थिए।
त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै बिरामीहरूले ‘कम्पाउण्डेट लेक्वेर’ खाने हिस्ट्री रहेको भन्दै ती रक्सीको नमुना संकलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अनुसन्धानका लागि पठाइएको जनाएको छ।
स्वास्वय मन्त्रालयका अधिकारी डा. नुर इसाम अब्दुल्लाहका अनुसार विरामीहरूमा अर्ली मिथानोल प्वाइजनिङ, पेट दुख्ने, वान्ता अाउनले लगायतका समस्याहरू देखिएको छ।
उनका अनुसार हालसम्म मिथानोल प्वइजनिङका ५१ विरामी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ४५ जना सेलनगोर ६ जना क्वालालम्पुरमा छन्। यी मध्ये ३ जना मात्र स्थानीय रहेको र बाँकी सबै विदेशी हुन्।
निर्देशक नुरका अनुसार अधिकांश म्यानमार, नेपाल, बंगलादेश र भारतका रहेका छन्। यस्तै यो संख्या बढ्न सक्ने उनले बताएका छन्। त्यस्तै मृत्यु हुने पनि अधिकांश विदेशी रहे पनि नेपालीको संख्या कति भन्ने एकीन भइसकेको छैन। मन्त्रालयले वेभरेज उत्पादक विक्रेताहरूलार्इ प्रहरीमा मुद्धा दर्ता गरेको छ।
← वन र वन्यजन्तुको सम्बन्धी विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षण प्रदान
मधेशी दल प्रति प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः भोको नभए पनि भोकको राजनीति गर्न भोकै छु भन्छन् →